gmail ပို့ရင် attached မတွဲဘဲ ဓါတ်ပုံ ဘယ်လိုပို့လဲ — MYSTERY ZILLION
gmail ပို့ရင် attached မတွဲဘဲ ဓါတ်ပုံ ဘယ်လိုပို့လဲ
gmail မှာ attached ကို မတွဲဘဲ ဓါတ်ပုံတွေ အီးမေလ်ထဲ ထည့်ပြီးဘယ်လိုပို့လဲခင်ဗျား။
သိချင်လို့ပါ။ အရမ်းအရေးကြီးလို့... ပါ။:77::77::77::77::77:
drag and drop the pic into mail's text box.
gmail ရဲ့ အပေါ်ဘယ်ဘက်ဒေါင့်မှာ Documents ဆိုတဲ့ လင့်ခ်လေးရှိတယ်။ အဲကနေ Google DOC ကိုသွား။ အဲမှာ နယူးတောင်းပြီး ပို့ချင်တဲ့ ပုံကို အပ်လုပ်တင်လိုက် ပြီးရင် အဲတင်လိုက်တဲ့ ပုံကို ဆလပ်လုပ် ကော်ပီကူး ဂျီမေးမှာ ပေ့စ်လုပ်လိုက်။ ဒါဆိုရဘီ။ အဲ နယူးတောင်းထားတဲ့ ဖိုင်ကိုတော့ ဆေ့ဖ်လုပ်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်....:39:
ကိုယ် လိုချင်တဲ့ ပုံ နဲ့ စာ တွေကို Select လုပ် ...
ပြီးတော့ ... Send Mail Body ထဲကို Drag ဆွဲထည့်ပြီး Drop လိုက်။
ဒါဆို ရပါပြီ။ \_:D/
ဘယ်လိုဘဲ လုပ်လုပ်ပေါ့ ..
Gmail ကို Standard mode နဲ့ Log in ၀င်ပြီးရင် .. setting >Lab ထဲကို သွားပါ.. Inserting Images ကိုရှာပါ .. တွေ့ရင် Enable လုပ်ပေးလိုက်.. ပြီးရင် save changes ကို နှိပ်ပြီး .. compose ကိုသွားပြီး Text toobar ပေါ်မှာ Insert image icon လေးပေါ်နေလိမ့်မယ် .. အဲဒါကို နှိပ်လိုက်ရင် .. ဘယ်နားကပုံကို တင်မလဲလို့ရွေးခိုင်းပါလိ်မ့်မယ် .. ဖိုင် Localtion ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ .. ကိုယ်ကွန်ပျူတာထည့်က ပုံတွေကို တင်လို့ရပါပြီ ... ဆိုဒ်ကြီးရင်ကြီးသလောက် နည်းနည်းတော့ ကြာပါလိမ့်မယ် .. တင်ပြီးရင် .. Add image ဆိုတဲ့ Button လေး Active ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် .. Click တစ်ချက် နှိပ်လို််က်ပါ .. အဲဒါဆိုရင် .. ကိုယ့်ပုံကို မူရင်းဆိုဒ်အတိုင်းမြင်နေရပြီပေါ့.. နောက်ပြီး .. အဲဒီ Lab tab ထဲမှာ .. မပြည့်မစုံလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် မှားပြီးတော့ဘဲဖြစ်ဖြစ် .. ပို့လိုက်မိတဲ့ email message ကို..5စက္ကန့်အတွင်း Undo Send ပြန်လုပ်နိုင်တဲ့ ဟာပါပါတယ် ..အဲဒါကိုရှာပြီး Enable လုပ်ထားလိုက်ပါ.. တစ်ခါတစ်လေအဲဒါကအရမ်းအသုံး၀င်ပါတယ်..